Posted by Rob Y. ngo-Ephreli 26, 2014 · Shiya amazwana
Okuthenga imoto esetshenziswa kungaba umsebenzi onzima. Kukhona izinto ezimbalwa ungahlola ngokwakho ukuqinisekisa ukuthi uthola imoto enhle futhi quality enhle. Enye yezinto ezibaluleke kakhulu okudingeka ukuba uhlole uma uthenga imoto esetshenziswa injini crank amafutha icala. In this post thina buyomboza kanjani ukuhlola kwabo futhi yini okumelwe siyibheke.
Into yokuqala ngqá sithanda ukuhlola uma ufuna imoto esetshenziswa amafutha engine. Enye yezinto engilithandayo ukuba ukwenze nje ukuya phambili futhi uhlale ngaphakathi emotweni bese ngibheka ushintsho lokugcina uwoyela sticker kusukela amafutha ushintsho inkampani enegama. Bheka usuku kanye mileage ukuthi saguquka futhi futhi sibheke mileage ukuthi odometer njengamanje ufunda. Qinisekisa ukuthi akusiyo esedlule ngenxa on kungaba mileage kanye usuku. Futhi hlola ukuqinisekisa ukuthi amafutha ukuthi esohlwini sticker olufana isisindo efanayo amafutha Kunconywa ngumkhiqizi. Isikhathi esiningi kuba lula ukuba anqume ukuthi yikuphi isisindo ilungile amafutha nje ngifuna ngaphansi hood. Abenzi Iningi zibhale khona phezu crank icala yokugcwalisa amafutha cap noma banalo sticker ezinye lapho ngaphansi hood ukuthi unika ulwazi.
Futhi kudingeka ucele umnikazi uma usebenzisa amafutha zokwenziwa noma okungokwesiko. Isizathu siwukuthi kanye imoto iye kwadingeka amafutha zokwenziwa eyasetshenziswa endabeni crank ukuthi wena ake sithi ukuqhubeka besebenzisa zokwenziwa ukugwema izinkinga Lubrication. Ezinye izimoto newer manje woza ngamafutha zokwenziwa esimweni crank kusukela factory, futhi kuyoba khona sticker ngaphansi hood noma ukusekela core ukunitshela ukuthi imoto kuphela amafutha zokwenziwa elisetshenziswa kuyo. Enye into okudingeka sikukhumbule ngezilingo zokwenziwa ukuthi kuyoba abiza kakhulu lapho kumenyezelwa ukushintshwa uwoyela. An ukushintshwa uwoyela ngamafutha njalo kuzobiza $20 ukuze $25, ngenkathi ukushintshwa uwoyela kanye zokwenziwa kuzobiza $50 ukuze $80 kuye ngokuthi ingakanani amafutha icala crank liphetheni.
Olandelayo, ufuna ukuya phambili futhi uvule hood. Thola injini crank icala idiphu stick. Ngokuvamile lezi izinduku cwilisa abe isibambo yellow noma ikhanda. Yiba amanikiniki nawe. Ukuqhubeka ukudonsa induku cwilisa bayiqede off. Bese uphinde stick cwilisa futhi ukuyikhipha it out aphinde futhi uhlole ukuze ubone ukuthi amafutha e uhla Kunconywa. The dipsticks babe uhlobo oluthile mshini phezu kwabo okubonisa yokusebenza uhla ephephile crank icala amafutha. Beka amanye amafutha eminweni yakho, noma uma amanikiniki une emhlophe, qhubeka a bhekisisa kulo. Unjani umbala ingabe? On i engine ukuthi ine 150 miles eyinkulungwane noma ngaphansi, kufanele okungenani ngandlela-thile ukubukeka golden kuso. Uma kuba ezingcolile kancane kulungile, ikakhulukazi uma useduze isikhathi aphinde ukushintsha uwoyela.
Olandelayo, unuka amafutha ( Ngiyazi ukuthi kuzwakala funny, kodwa ngethembe). Akufanele ube nephunga wokushiswa kuso. Akufanele ube nephunga gas kuso noma. Uma it inuka gas eluhlaza, ke kukhona inkinga uhlelo uphethiloli futhi kungashiwo nokulahlwa uphethiloli eluhlaza singene crankcase. Isikhathi esiningi nakuba lokhu bekungaba misa ukukhanya isheke engine.
Ukuhlola amafutha engine ungomunye izinto eziningi okumele ihlolwe ukuze siqinisekise ukuthi uthenga imoto of quality okuhle. Ukuze ufunde kabanzi mayelana izinto ukuhlola kanye nezindlela ezingcono ukuhlola kwabo, uvakashele iwebhusayithi yethu @ KNWAutobody.com
Tags: Ukuhlola amafutha engine